तपाइलाई थाहा नहुनसक्छ ! यी राशिका केटाहरुले सधै पाउँछन् प्रेममा धोका::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
शनिबार, चैत्र १०, २०७४ | Saturday 24th March 2018
तपाइलाई थाहा नहुनसक्छ ! यी राशिका केटाहरुले सधै पाउँछन् प्रेममा धोका
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, पुस ३०, २०७४
ममा धोका खानु आजकालका युवा युवतीमा कुनै अचम्मको कुरा होइन। आजको युवा पुस्तामा प्रेममा धोका खानु अर्थात प्रत्येक दिन ‘प्याचअप’ र ‘ब्रेकअप’ हुनु धेरै सामान्य कुरा हो।तर यसको अर्थ यो होइन कि आजकल कुनै पनि साँचो माया गर्ने मान्छे छैन।
तर प्रायः यी साँचो माया गर्ने मान्छेले जसरी पनि मायामा धोका पाउँछन्। अहिले प्रचलन यस्तो बस्यो की आजकल जसलाई पनि जो कसै न कसैले धोका दिन्छन् ।
याद गर्नुहोस् कि यी राशि को मान्छेले आफ्नो सम्बन्ध र प्रेममा पूर्ण विश्वास राख्नुपर्छ नत्र सम्बन्ध जहिले पनि टुट्न सक्छ । किनकि कुनै पनि मानिस सतप्रतिशत सहि या सम्पन्न कहिल्यै हुँदैन। उसमा केहि न केहि कमि अ अवस्य पनि हुन्छ।
यो राशिको मानिसहरूले सधै आफ्नो प्रेमिकालाई साँचो माया गर्छन्। तर भाग्यले उनीहरुबाट केही अरु नै आशा गर्दछ। विशेषगरी मेष राशिका केटाहरूले आफ्नो प्रेमिकालाई माया गर्छन्। तर उनीहरूलाई कदम कदममा धोका र अपमान भोग्नु पर्छ।
यस राशिका पुरुषहरु मनमा पाप नभएका हुन्छन्। उनीहरु आफ्नो प्रेमिकाको सबै साथीहरूसँग कुराकानी गर्छन्। तर उनीहरु जोसँग माया गर्छन् उनीहरुका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश, यस राशिको केटाहरुको प्रेमिकाले उनीहरुको जिस्किने बानीलाई मध्यनजर गरेर कहिले पनि यसलाई १०० प्रतिशत मनन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यस राशिका केटाहरुले प्रेममा धोका पाउँछन् । प्रेमीका संग जिस्केने बानीले धोका पाउने गर्दाछन् ।
यस राशिकाका पुरुषहरुले तर्क (लोजिक) लाई धेरै मान्छन्। उनीहरु भावनात्मक विषयमा कमजोर हुन्छन्। जहिले पनि प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीले प्रेमिका र प्रेमिकाले प्रेमीलाई सानो भन्दा सानो कुराहरु शेयर गर्नु पर्छ । यदि कुनै कुरा लुकाईयो र पछि कारणबस आफ्नो कुरा फुस्कियो भने त्यसले सम्बन्धमा समस्या पैदा गरिदिन्छ। त्यसैले पनि सम्बन्ध तोडिने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
धनु राशिका मानिसहरूले एक्सन र रोमान्सलाई बढी मनपराउछन्। तर यी राशीका पुरुषहरू आफ्नो बेडरूम र आफ्नो प्रेमिकाको अगाडी कमजोर हुने गर्छन्। उनीहरू रोमान्सलाई त्यो स्तर सम्म पुर्याउन असफल हुन्छन्। जतिसम्म कि उनिहरुको प्रेमिकाले आशा गरेका हुन्छन्। यसका कारण, उनीहरूको पार्टनर असन्तुष्टी भएर तिनीहरूलाई धोका दिन्छन् ।
यस राशिका पुरुष जोशीला हुन्छन् र उनीहरू आफ्नै संसारमा हराएका हुन्छन्। अन्तमा, तिनीहरूका पार्टनरले तिनीहरूलाई छोड्छन्। उनीहरूले यी कुराहरू ठीक गर्न पनि प्रयास गर्दैनन्। तर त्यतिबेला यो ढिला भैसकेको हुन्छ ।
कस्तो अचम्मको अध्ययन ! हस्तमैथुनमा केटा कि केटी अगाडि ?
आमा बनेपछि चर्चित हिरोइनहरुको जिन्दगी
रेखाको सम्बन्धमा एक पछि अर्को लफडा !
एन्ड्रिया बनिन् विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षक, नेपालका विनोद उत्कृष्ट ४० मा
आमिर खानको सफलताको रहस्य के हो ?
चर्चित मोडल रक्षा श्रेष्ठ र राजु श्रेष्ठको अभिनयमा “सक्की गो नि त् ” भिडियोसहित सार्बजनिक
यी हुन् नेपालका १० ठूला बैंक घोटाला
२६ महिनापछि बैठकमा छिरेका नरहरि आचार्यले देउवालाई यसो भने …
फेरी प्रचण्डविरुद्ध ठूलो ‘घेराबन्दी’ हुने भन्दै वर्षमान दिए यस्तो संकेत
धुलिखेलका एक पाकेटमार, जो चढ्छन् आफ्नै कार
अभिनेत्री सोनम कपुरले को संग लगनगाँठो कस्दै छिन ?
यस्तो पापी श्रीमान, जसले घोचे श्रीमतीको गुप्ताङ्गमा पाइप !
खुल्ला विश्वविद्यालय अन्तरगत ४ वटा नया प्राबिधिक बिषयको भर्ना खुल्यो, नामावली सहित